Erling Haaland Oo Jawaab ka Bixiyay Xanaaqii Uu Garoonka Uga Baxay & Maaliyadii Dortmund Ee Uu Dhulka Ku Tuuray | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaErling Haaland Oo Jawaab ka Bixiyay Xanaaqii Uu Garoonka Uga Baxay & Maaliyadii Dortmund Ee Uu Dhulka Ku Tuuray
Erling Haaland Oo Jawaab ka Bixiyay Xanaaqii Uu Garoonka Uga Baxay & Maaliyadii Dortmund Ee Uu Dhulka Ku Tuuray
Erling Haaland ayaa u muuqday mid dejiyay walaac kasta oo ay qabeen taageerayaasha Borussia Dortmund ka dib markii uu ka baxay garoonka isagoo careysan dhamaadkii kulankii ay barbaraha 2-2 shalay la galeen kooxda Koln.
Haaland ayaa dhaliyay labo gool oo mid ka mid aheyd uu dhaliyay waqtigii dhimashada ciyaarta, wuxuuna marayaa 33 gool 31 kulan uu dheelay xilli ciyaareedkan.
Laakiin xiddiga reer Norway ayaa carro xoogan ka muujiyay natiijada ka dib markii uu yeeray seerigii ugu danbeeyay ee ciyaarta isagoo dhulka ku tuuray maaliyada Dortmund islamarkaana si carro leh uga baxay garoonka.
20 jirkaan ayaa ah weeraryahan si weyn looga raadinayo Yurub iyadoo lala xiriirinayo kooxaha Man United, Man City, Chelsea, Barcelona iyo Real Madrid.
Iyadoo shaki la gelinayo mustaqbalkiisa Dortmund, Haaland ayaa laabta u dejiyay taageerayaasha kooxdiisa isagoo sheegay in carradiisa ay la xiriirtay natiijada xun ee soo wajahday kooxdiisa.
Haaland ayaa ku soo qoray Instagram: “Ma aheyn natiijo fiican. Waxaan natiijadaan u adeegsan doonaa dhiirogelin aan si xoogan ugu soo laabano. Aad ayaad u mahadsan tihiin dhamaan taageerayaasha Borussia Dortmund ee weli ina garab tagaan. Waan soo laaban doonaa dhawaan.”
Haaland ayaa la sheegay in qandaraaskiisa ay ku jirto qodob dhigaya in lagu burburin karo 75 milyan euro sannad ka bacdi.
Laakiin Dortmund ayaa la filayaa inay ka fiirsan doonto dalabyada qaaliga ah ee loo soo gudbinayo xagaagan.
Inkastoo kooxaha Premier League ay xusul duub ugu jiraan soo xerogelinta Haaland hadana jariirada Marca ayaa sheegeysa in weeraryahanka uu doonayo kooxda Real Madrid.